အဲရစ်အဒမ်စ်က နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်အဖြစ် အနိုင်ရကြောင်း ကြေညာ - Xinhua News Agency
အဲရစ်အဒမ်စ်က နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်အဖြစ် အနိုင်ရကြောင်း ကြေညာ
“အားလပ်ရက်ခရီးသွားရာသီအတွင်း မြန်နှုန်းမြင့်ရထား ပုံမှန်ပြေးဆွဲနိုင်ရန် “ရထားလမ်းဆရာ၀န်” ကူညီပေးလျှက်ရှိ”
နယူးယောက် ၊ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ယခင်နယူးယောက်မြို့ တော် ရဲဗိုလ်ကြီး(ဟောင်း) နှင့် ဘရွတ်ကလင်းမြို့ ဒေသန္တရဥက္ကဌ အဲရစ်အဒမ်စ် (Eric Adams) က ၎င်းသည် နယူးယောက်မြို့တော်ဝန် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၂ ရက် ညပိုင်းတွင် ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့သည်။“ ဒါက ကျနော့်အိပ်မက်တွေ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာတာပါ ၊ အားလုံးရဲ့ချစ်ခင်မှုနဲ့ နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရတဲ့အပေါ် ကျွန်တော့်အတွက် ဒီထက်ပိုပြီး ဂုဏ်ယူစရာမရှိတော့ပါဘူး ” ဟု အဒမ်စ်က သူ၏ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ မြို့တော်ဝန်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အဒမ်စ်က ထောက်ခံမဲ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီး ပြိုင်ဘက် ရီဘတ်ပလီကန်ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း Curtis Sliwa က ထောက်ခံမဲ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရရှိခဲ့ကြောင်း နယူးယောက်မြို့တော် ရွေးကောက်ပွဲဘုတ်အဖွဲ့၏ ရွေးကောက်ပွဲည နောက်ဆုံးမဲရလဒ်ထုတ်ပြန်မှုအရ သိရသည်။
နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသည့် အဲရစ်အဒမ်စ် အောင်ပွဲခံနေသည်ကို နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
“ အဲရစ်အဒမ်စ်ဆီ ဖုန်းမဆက်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် သူ့အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ထောက်ခံမှုကို ကတိပြုပါတယ်။ အခုချိန်ဟာ နယူးယောက်မြို့တော်အတွက် လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုကို သွားရတော့မယ့် အချိန်ပါပဲ” ဟု ပြိုင်ဘက် Sliwa က နိုဝင်ဘာ ၂ ရက် ညပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင် အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်တစ်ဦးဖြစ်သူ အဒမ်စ်သည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် David Dinkins ပြီးနောက် နယူးယောက်မြို့တော်သမိုင်းတွင် ဒုတိယမြောက် အာဖရိကန်-အမေရိကန် လူမည်း မြို့တော်ဝန်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
လက်ရှိ ရာထူးမှ ထွက်ခွားတော့မည့် နယူးယောက်မြို့တော်ဝန် Bill de Blasio သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက ယင်းရာထူးကို တာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး သူ၏ ဒုတိယရာထူးသက်တမ်းမှာ ယခုနှစ်ကုန်တွင် ပြီးဆုံးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
De Blasio သည် နယူးယောက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး နယူးယောက်မြို့တော်ရွေးကောက်ပွဲဘုတ်အဖွဲ့ထံ ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းမှုကို ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Eric Adams announces victory in NYC mayoral election
NEW YORK, Nov.3(Xinhua) — Former New York City police captain and Brooklyn Borough President Eric Adams announced on Tuesday night that he has won the mayoral election in New York City.
“This is my dream come true, and I couldn’t be more proud to represent the City that we all love as your Mayor-elect,” Adams wrote on his social media account.
Adams got over 65 percent of the votes in the election, while Republican candidate Curtis Sliwa collected less than 30 percent, according to the latest election night results issued by the Board of Elections in the City of New York.
“Even though I couldn’t reach Eric Adams on the telephone, I pledge him my support and it’s time for New York City to move inanew direction,” Sliwa said on Tuesday night.
Adams, seen asamoderate Democratic, would be the second African American mayor in the history of New York City after David Dinkins, who held the post from Jan. 1, 1990 to Dec. 31, 1993.
Outgoing New York City Mayor Bill de Blasio has held the office since 2014 and his second term would end later this year.
De Blasio has reportedly filed paperwork with the New York State Board of Elections, paving the way for his announcement to run for governor of the New York State.
Photos- 1/2- Eric Adams attendsacelebration after the mayoral election in New York City, the United States, Nov. 2, 2021. (Photo by Winston Zhou/Xinhua)
အီရန်နိုင်ငံက ဗီယင်နာ နျူကလီးယားဆွေးနွေးပွဲများအား နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်၌ ပြန်လည်စတင်မည်
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက် RCEP က ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် စတင် အသက်ဝင်မည်